Ku saabsan gelitaanka xoogga TPAN - Maarso Adduunka
Bogga ugu weyn » Noticias » Isgaarsiinta Rasmiga ah » Ku saabsan soo gelitaanka xoog ee TPAN
War-murtiyeed ku saabsan gelitaanka dhaqan gelinta heshiiska Mamnuuca hubka Nuclearka (TPAN)
War-murtiyeed ku saabsan gelitaanka dhaqan-gelinta Heshiiska Mamnuuca Hubka Nukliyeerka (TPAN) iyo sannad-guuradii 75aad ee Xallinta 1[i] ee Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay
Waxaan wajaheynaa "bilowga ciribtirka hubka nukliyeerka."
Bishii Janaayo 22, ayaa Heshiiska Mamnuuca Hubka Nukliyeerka (TPAN). Waxay si gaar ah uga mamnuuci doontaa dhinacyada Dowladaha inay horumariyaan, tijaabiyaan, soo saaraan, soo saaraan, soo iibsadaan, heystaan, dejiyaan, isticmaalaan, ama ku hanjabaan inay adeegsadaan hubka nukliyeerka iyo caawinta ama dhiirigelinta falalka noocaas ah. Waxay isku dayi doontaa inay xoojiso sharciga caalamiga ah ee jira ee ku waajibinaya dhammaan dowladaha inaysan tijaabin, adeegsan ama u hanjabin adeegsiga hubka nukliyeerka.
para Adduunyo la’aan Dagaal iyo Rabshado Waxay sabab u tahay dabaaldeg sababtoo ah hada wixii ka dambeeya runti waxaa jiri doona qalab sharciyeed heer caalami ah oo qeexaya himilooyinka in tobanaan sano ay hadheeyeen muwaadiniin badan oo meerayaasha ah dalal badan.
Hordhaca TPAN, halista ka dhalan karta jiritaanka hubka nukliyeerka iyo cawaaqib xumada bani'aadamnimo ee ka dhalan karta isticmaalkooda ayaa la muujiyay. Gobollada ansaxiyay heshiiska iyo kuwa qiraya waxay muujinayaan halistaan ​​waxayna taasi muujineysaa sida ay uga go'an tahay adduun ka madax bannaan hubka nukliyeerka.
Bilaabashadan wanaagsan ee xamaasadda leh waa inaan hadda ku darnaa in dawladaha ansaxinta ay horumariyaan oo ay ansixiyaan sharciga si loo hirgeliyo ruuxda heshiiska: oo ay ku jiraan mamnuucida socdaalka iyo maalgelinta hubka nukliyeerka. Kaliya mamnuucaya maalgelinteeda, joojinta maalgashiga warshaddeeda, waxay lahaan laheyd qiime sare oo sumad leh oo wax ku ool ah, muhiimad weynna u leh tartanka hubka nukliyeerka.
Haatan wadadii ayaa la dejiyay waxaanan rajeynaynaa in tirada waddamada taageera TPAN ay ku sii kordhaan doonaan xeelad aan la joojin karin. Hubka Nukliyeerka hadda ma ahan astaan ​​u ah horumarka farsamada iyo awoodda, hadda waxay astaan ​​u yihiin cabudhinta iyo halista aadanaha, ugu horreyntii, muwaadiniinta waddamada laftoodu hubka nukliyeerka. Sababtoo ah hubka "Nukliyeerka" "cadowga" waxaa looga dan leeyahay wax walba dhamaan magaalooyinka waaweyn ee wadamada leh, looma bartilmaameedsado kuwa aan lahayn.
TPAN waxaa lagu gaarey natiijada XNUMX sano ee dhaqdhaqaaqa hub ka dhigista nukliyeerka ee bulshada rayidka ah tan iyo markii qaraxyadii nukliyeerka ee Hiroshima iyo Nagasaki ay muujiyeen saameyntooda bani'aadamnimo ee musiibada ah. Waxay ahayd wadajirka, ururada iyo barxadaha, iyadoo taageero laga helayo duqa magaalada, xildhibaanada iyo dowladaha oo lagu wacyi galiyay arintan oo sii waday la dagaalanka sanadahan ilaa iyo hada.
Sanadahan oo dhan, waxaa la qaaday tillaabooyin muhiim ah sida: heshiisyada lagu mamnuucayo tijaabooyinka nukliyeerka, yareynta tirada hubka nukliyeerka, baahinta guud ee hubka nukliyeerka iyo mamnuucidooda in ka badan 110 dal iyada oo loo marayo aagagga aan hubka lahayn. Nuclearka
Isla mar ahaantaana, ma aysan joojin tartanka hubka nukliyeerka ee awoodaha waaweyn.
Aragtida ka-hortaggu way fashilantay maxaa yeelay inkasta oo ay ka hortagtay isticmaalkeeda iskahorimaadyada hubeysan, saacadda aakhiro-ka (DoomsdayClock oo ay isku duba-ridaan saynisyahanno iyo abaal-marinnada Nobel) waxay muujineysaa inaan 100 ilbiriqsi u jirno isku dhaca atomiga. Suurtagalnimada ayaa sii kordheysa sanadba sanadka ka dambeeya in hubka nukliyeerka loo adeegsan doono si shil ah, kororka isku dhaca, xisaab xumo ama ujeedo xun. Doorashadan ayaa suurtagal ah inta hubku jiro oo uu qayb ka yahay siyaasadaha amniga.
Dawladaha hubka nukliyeerka ugu dambayn waa inay aqbalaan waajibaadkooda si loo gaaro hub ka dhigista nukliyeerka. Tan waxay ku heshiiyeen qaraarkii ugu horreeyay ee Qaramada Midoobay, Xallinta Golaha Guud ee Qaramada Midoobay, oo la ansixiyay Janaayo 24, 1946 iyadoo la isku raacsan yahay. Sidoo kale Qodobka VI ee Heshiiskii Fidinta, waxay isku xilqaameen inay ka shaqeeyaan hub ka dhigista nukliyeerka sida Xisbiyada Dowladaha. Intaas waxaa sii dheer, dhammaan dowladaha waxaa ku xiran sharciyada caalamiga ah ee ku saleysan caadooyinka iyo heshiisyada mamnuucaya hanjabaadda ama adeegsiga hubka nukliyeerka, sida ay caddeeyeen Maxkamadda Caalamiga ee Caddaaladda ee 1996 iyo Guddiga Xuquuqda Aadanaha ee Qaramada Midoobay ee 2018.
Soo galitaanka xoog ee TPAN iyo sanadguuradii 75aad ee Go'aanka Golaha Amniga, laba maalmood kadib, waxay bixisaa daqiiqad ku habboon oo lagu xasuusiyo dhammaan gobollada sharci darrada ah ee hanjabaadda ama adeegsiga hubka nukliyeerka iyo waajibaadka hub ka dhigista. fiiro gaar ah u leh si dhaqso loogu dhaqangaliyo.
Janaayo 23, Maalinta ku xigta marka uu dhaqan galo TPAN, ururka MSGySV ee bahwadaagta la ah ololaha caalamiga ah ee ICAN wuxuu fulin doonaa Dhaqanka Cyberfestival lacagta xafladaha Tallaabo weyn oo loo qaaday aadanaha”. Waxay noqon doontaa booqasho in ka badan 4 saacadood ah iyada oo loo marayo qaar ka mid ah riwaayadaha, hadalada, waxqabadyadii hore iyo kuwa hadda, oo ay la socdaan fanaaniinta iyo dhaqdhaqaaqayaasha ka soo horjeeda hubka nukliyeerka iyo nabadda adduunka.
Waa waqtigii la soo afjari lahaa xilligii hubka nukliyeerka!
Mustaqbalka aadanaha wuxuu suurtagal noqon doonaa oo keliya hubka nukliyeerka la'aan!
[i]Waxaa la dhisi doonaa Guddi ka tirsan Shaqaalaha Milatariga si ay talo iyo gacan uga siiyaan Golaha Amniga dhammaan arrimaha la xiriira baahiyaha milateri ee Golaha ka jira ilaalinta nabada iyo amniga caalamiga ah, shaqaalaynta iyo taliska ciidamada oo loo dhiibo qaabkeeda, iyadoo la tixraacayo hub iyo hub ka dhigis.
Kooxda Xiriirinta Adduunka ee Dunida Dagaal la'aan iyo Rabshado
Categories Isgaarsiinta Rasmiga ah Tigidhka tigidhka